Dowladda Puntland oo sheegtay inaan dhulkeeda loogu geysan karin dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi | puntlandi.com
Dowladda Puntland oo sheegtay inaan dhulkeeda loogu geysan karin dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi
Dowladda Puntland ayaa sheegtay inaan dhulkeeda wax dhibaato ah loogu geysandoonin dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee Somaaliya, kadib markii maamulka Hargeysa uu bilaabay in dadka kasoo jeeda gobolada Puntland uu qafaasho islamarkaana kala dego gaadiidka safarka.
Guddiga difaaca Puntland, waxa ay qoraal ay soo saareen ku sheegeen in dowladda Puntland aysan ku dayayanayn ficilada gurracan uu maamulka Hargeysa ku dhaqmayo, kaasoo sii kala fogeynayo labada shacab ee walaalaha ah.
Guddiga difaacu waxay sheegeen inaysan marnaba oggolaandoonin in dhibaato loo geysto cid kasta oo kasoo jeeda goboladaas oo Puntland ku nool ama addeeg usoo doonata, waxay kaloo cadeeyeen inaan waligood wax dhibaato ah loogu geysan gudah Puntland.
Waxaa guddigu nasiib darro ku tilmaameen in maamulka Hargeysa colaadii kala dhexeysay dowladda Puntland ay weeciyeen dadka shacabka ah ee maatada ah iyo ardayda wax kabarata goboladooda, taasoo oo cadayn u ah farriintii hanjabaada ahayd ee Feysal Cali Waraabe diray.
Warsidaha Puntlandi ayaa ogaaday in qoysas badan oo reer Puntland iyo dhaliyaro kale oo waxbarasho ujoogay Hargeysa iyo Borama inay dib ugusoo laabteen Puntland, kadib markii ammaankooda uu halis ku sugan yahay.